Muxuu salka ku hayaa khilaafka mudada soo jiray Puntland iyo Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? – Kalfadhi
Muxuu salka ku hayaa khilaafka mudada soo jiray Puntland iyo Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya?
in Baarlamaanka, Falanqeyn
Khilaafka soo noq noqda ee badanaa u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad-goboleedka Puntland ayaa salka ku haya arrimo siyaasadeed, kuwa sharci iyo khayraad qaybsiga, sida ay muujinayaan tixraaca go’aanadii khilaafka labada dhinac ee ka soo baxay Puntland lixdii sano ee ugu dambeeyay.
Mudo ku dhow sannad xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kan Puntland ma uusan hagaagsanayn. Dabaqayaadii bishii Maajo xukuumadda cusub ee Puntland ee uu hoggaaminayo Siciid Cabdullahi Deni waxay soo saartay warqad ay ku muujinayso in aysan dowladda federaalka kala sii shaqayn karin arrimaha dib u eegista dastuurka, ammaanka iyo doorashooyinka; khilaafkaas ayaa salka ku haya xeerarka doorashooyinka, badroolka iyo dakhliga ee xukuumadda Soomaaliya ay geysay baarlamanka iyagoo aan lagala tashan dowlad-goboleedyada iyo in aysan dhinacyadu si dhab ah uga heshiin khilaafaadkii hore.
Saxaafadda ayaa ugu yaraan sannadkiiba mar lagu arkaa khilaaf u dhexeeya labada dhinac, laakiin war-saxaafadeedyadu waxay muujiyaan inuu yahay wax soo jiitamayay oo in badan labada dhinac ay si gaar ah uga wada-hadleen, ugu dambaynse dadweynaha u gudba.
Arrinta khilaafka siyaasadda ayaa ka dhalata hannaanka loo jihaynayo doorashooyinka, dejinta qorshayaasha qaranka, hirgelinta nidaamka federaalka, diyaarinta xeerarka masiiriga ah iyo go’aan qaadashada dowladda federaalka ah ee aan laga wada tashan; tusaale ahaan marka uu dowladda ka soo boxo go’aan siyaasi ah oo xasaasi ah oo aan lagala tashan dowlad-goboleedyada, sida go’aankii khilaafka khaliijka. Waxaa kaloo mudooyinkii dambe khilaafka dhalinayay sida ay dowladda federaalku u wajahayso dowlad-goboboleedyada.
Khilaafka siyaasaddu wuxuu si dhow ugu xiran yahay midka sharciga ee ku sal qotoma nidaamka federaalka dalka, sida ay muujinayaan xogaha aan aruurinay. Haddaba xagee bay ka jirtaa kala duwanaanta sharci ee dowladda federaalka iyo Puntland?
Sannadkii 2012 waxaa afti ergo lagu ansixiyay dastuurka Puntland ee la sameeyay 2009, markaas oo laga guuray axdi qarameedkii lagu dhisay Dowladda Puntland ee Soomaaliya oo la asaasay sannadkii 1998. Axdi qarameedka iyo dastuurkaba waxaa ku cad mabaa’ida loo dhisay Puntland oo ah in ay dadka deegaanka u abuurto nabad iyo nolol wanaagsan isla markaasna lagu gaaro dowlad Soomaaliyeed, maadama dalku uu burbur ahaa xiligii la dhisay dowlad-goboleedkan.
Marka aan eegno Mabaa’dida asaasiga ah ee Puntland lagu dhisay, qodobka afraad ee dastuurka oo ka hadlaya hannaanka xukunka farqadiisa 1aad ayaa qoraysa sidan; Dowladda Puntland waa qayb ka mid ah Soomaaliya, xil ayaana ka saaran hirgelinta dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaaliga ah. Isla qodobkaas farqadiisa 3aad ayaa qoraysa sidan; Inta laga dhamaystirayo dastuur federaal ah oo Puntland wax ka ansixisay ka dibna afti dadweyne lagu meelmarinayo, Puntland waxay lahaanaysaa awood dowlad-madax bannaan.
Puntland oo inta badan dowladda federaalka ah ku eedaysa in ay baalmarto hannaanka federaalka dalka waxay cuskataa qodobka 50naad ee dastuurka federaalka ah ee KMG ah, kaas oo dhigaya Mabaadi’da Federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Farqadda 1aad ee qodobkaas ayaa qoraysa sidan hoose; Heerarka kale duwan ee Xukuumaduhu marka ay dhexdooda ka macaamilayaan iyo marka ay ku gudo-jiraan adeegsiga awoodda sharci-dejinta iyo awoodaha kaleba, waa in ay ilaaliyaan mabaadi’da Federaalnimada.
Hannaanka federaalka weli waxaa ka jirta kala aragti duwanaan ay ka qabaan bulshada, siyaasiyiinta maxaliga ah iyo xataa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, waase arrin u baahan in laga heshiiyo ka hor dhamaystirka dastuurka dalka.
Shan sano ka hor markii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hore ra’isal wasaare uga soo noqday dowladda federaalka ah aadna uga warqabay khilaafaadka labada dhinac uu noqday madaxweynaha Puntland waxaa la filayay in wax ka iska bedeli doonaan khilaafaadkan soo noqnoqda. Laakiin In ka badan afar mar ayuu aad u xumaaday xiriirka Puntland iyo federaalka mudada hoggaankiisa, khilaaf salka ku haya qodobada kore ee aynu soo sheegnay.
Waxaa xusid mudan; in kastoo aan la soo saarin khayraadka cayriin ee dalka misana labada dhinac waxay badanaa isku qabtaan deeqaha caalamiga ee gargaarka iyo horumarinta.
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo Galmudug u jeediyay in ay caddaalad u raadiso dadkii lagu laayay Gaalkacyo